5 Qodob oo Ganacsigaaga Kor Ugu Qaadi Kartid
Home » Ganacsiga » 5 Qodob oo Ganacsigaaga Kor Ugu Qaadi Kartid
Qof walbo oo shirkad ama xarun ganacsi u furantahay waxaa uu hadafkiisu yahay sidii u ku heli lahaay macaamiil badan hadii kale ganacsiga kuma jireen. Hadii aad tahay qof ama shirkad ku jira suuqa ganacsiga waxaa muhiim ah inaa ka faa’iideysatid 5’taan qodob oo kala ah.
1. Magac – waa wax lagu gartaa qof ama sheey. Caruurta markii dhashaan waxaa loo baxiyaa magac oo walidkisa la jeclaadaan kaas oo larabo in looga aqoodo caruurta kale. Hadii cunuga loo bixinin magac way adagtahay in la aqoonsada, Waxaa sidaas oo kale la mid ah shirkad markaad abuurtid waa inaad magac u bixisid si looga dhex garto shirkadaha kale.
2. Astaan (LOGO) – Qofka shaqsiga waxaa lagu gartaa wajigiisa , sidoo kale waxaa lagaa rabaa inaad shirkadaada u sameysid waji bulshadu ku garato. Astaanta shirkada waa sheey aad qaali u ah oo lagaa rabo inaad u ulaalisid si wajigaaga oo kale. Calamka waxaad arkeysaa shirkado ku bixinayo lacago gaarayo malaayiin doolar si astaantooda shirkadda ugu dhex muuqan laheyd bulshada. Astaamaha shirkado ugu caansan waxaa ka mid ah Coca- Cola, McDonalds, Nike, Apple, Mercedes iwm. Waxaa xooga saartaa inaad shirkadda u heshid magac soo jiidasho leh, afkane u sahlan.
3. Gaar kuu ah – Hadii ganacsigaaga uu yahay dukaan waxaa isku daydaa inaad dukaamada kale aadan koobi ku sameynin. Marwalba isku day inaad wax cusub suuqa keentid intaad la mid noqon laheeyd dukamada kale. Inaad gadid wax ka duwan dukaamada kale waxaa uu hormarinayaa ganacsigaaga sababtoo ah waxaad dabooleysaa baahida suuqa.
4. Fadhi ku Dirir – Dhaqanka Soomaaliyeed dhanka ganacsiga wuxuu ahaay in geed hoostiis la fariisto oo wax lagu kala iibsado. Sanadkaan hada la joogo 2018 oo ah mid wax badan ka duwan sidii waagi hore loo ganacsan jiray. Suuqa ganacsiga ma ahan geed hoostiis, lakiin waxaa modaa dhaqankaas inuu ganacsato badan uunan ka harin, ka dhigteen xaruntooda ganacsiga meel lagu sheekeysto ama goob fadhi ku dirir, Tusaale waxaa rabtaa inaad soo gadatid saliida timaha , meheraddii aad saliida aad karabtay markaad soogashay , waxaa aragtay Tora 5 — 6 Rag/Dumar oo kusheekaysanayo , su’aashu waa Macmiilkan masoo galayaa mise wuu dhaafayaa meheradaas? Halkaasi waxa suurto gal ah inaad ku weysid qof wax kaa gadan lahaay!!.
5. Internetka – Waa meesha ugu sahlan aad shirkadaada bulshada ku ogeeysiin laheyd adeegga aad heysid, uma baahnid inaa warqado la wareegtid si aad bulshada u gaarsiisid , Waxaa isticmashaa shirkadaha xayeeysiinta soomalida, wargeysyada iyo shirkadda Waahelay.com oo ah shirkad diwangalisa ganacsiga Soomaalida aduunka si macaamishaada kuugu helaan si fudud.